५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन मास्क लगाउँ हुँदैन ? – Dailny NpNews
५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई किन मास्क लगाउँ हुँदैन ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ समय: १०:५०:३९
सामान्यतया, ५ वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले मास्क लगाउनु पर्दैन। यो सल्लाह साना बालबालिकाको सुरक्षा र समग्र हितमा आधारित छ। किन यसो भनियो? स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिर कुमार अधिकारीका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि अनिवार्य मास्क व्यवहारिक नहुने भएकाले मास्क लगाउनुभन्दा भिडभाडबाट जोगाउनु उत्तम हुन्छ।
५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मास्क लगाउदा र्‍याल तथा सिगान निस्कने, नाक बन्द हुनेसक्ने र बालबालिकाले मुखमा लगाएको मास्क मुखभित्र हाल्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई मास्क लगाइदिनु भन्दा भिडभाडबाट जोगाउन उपयुक्त हुन्छ।
५ वर्ष मुनिका बालबालिका पनि संक्रमणको जोखिममा हुने भएकाले उनीहरुलाई भिडभाडबाट जोगाउनु पर्ने डा अधिकारीले बताए। उनले अस्पताल वा भिडभाडमा जानै पर्ने अवस्था भएको अवस्थामा यी उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक दुरी कायम गर्ने वा मास्क लगाइदिएर अभिभावकले विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने जानकारी दिए। स्वास्थ्य खबर बाट